Bọchị: Machị 30, 2020
Obodo Mersin mepere emepe na-arụ ọrụ dị mkpa na ngalaba ya niile site na ịme ihe iji chebe ahụike ọha na eze megide ọrịa coronavirus (COVID-19) nke na-agbasa n'ụwa ma na-abawanye. Obodo Obodo, ịrụ ọrụ n’usoro a [More ...]
Obodo Konya na-aga n'ihu na -eme ka ihe eji egbochi ya na mpaghara 31 n'ime oke nke mgbochi iji buso coronavirus. Iji gbochie mgbasa nke coronavirus, bọs na trambụ nke ndị isi obodo ukwu bụ mgbe niile [More ...]
Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu zara ajụjụ onye nta akụkọ İsmail Küçükkaya ajụjụ banyere isi okwu na mmemme "Mkpu mkpu" na-agbasa ozi na TV FOX. N'ihi ọrịa coronavirus na-emetụta ụwa dum, ego ndị obodo na-enweta bụ "ihe efu" [More ...]
Ndị ọkwọ ụgbọ ala, bụ ndị na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi ụnyaahụ, nke ndị enyemaka İBB, Bus Inc., kwuru banyere ike abụọ ahụ. Ọbụna n'ụbọchị nkịtị mgbe ọrịa na-efe efe adịghị, ọtụtụ ndị njem [More ...]
Etu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? Inweta Asambodo Inye ikike njem site n’aka E-Government? Ihe ndị achọrọ maka Inweta Nkwado Njem? Kedu onye nwere ike inweta akwụkwọ ikike njem ahụ? Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan na ikike ịbanye njem njem nke etiti [More ...]
Achọtara Thomas Schaefer, Mịnịsta na-ahụ maka ego nke steeti Hessen na Germany ka ọ nwụrụ n'ụzọ dị elu. Na nkwupụta e dere ede si na ieslọ Ọrụ Mkpesa nke Wiesbaden na Ngalaba Ndị uweojii Westhessen, ụzọ ndị ahụ n'okporo ụzọ ụgbọ oloko dị elu n'obodo Hochheim [More ...]
Ezie na ọnụọgụ ụdị coronavirus ọhụụ (Kovid-19), nke pụtara n'obodo Wuhan, Hubey nke China wee gbasaa n'ọtụtụ mba ụwa n'ime obere oge, gafere 724 puku, n'ihi Kovid-19 [More ...]
Achọpụtara na ndị ọrụ 7 kewapụrụ iche mgbe ha nwesịrị nnwale mgbaàmà nke ọrịa corona na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-arụzi ụgbọala IETT. N’ebe a na-adọba ụgbọala eletrik Istanbul, Tram na Tunnel Enterprises (IETT) sonyere n’obodo Istanbul Metropolitan (İBB) [More ...]
Ọmụmụ nke Kocaeli Metropolitan nke obodo mepere emepe megide ajọ ọrịa coronavirus (Covid-19) na-aga n'ihu. Obodo Kocaeli nke Kopoleli kesara ọgwụ na mkpuchi nye ndị nwere ọrụ iji rụọ ọrụ na njem ọha na eze n'ime usoro nke coronavirus. EGO NA-EBURU N'IME [More ...]
Minista Selçuk: “Anyị na-elebara ndị nwere nkwarụ anya nke na-erite uru na uru ọghọm nke Enyemaka Nlekọta Homelọ dịka emebie ruo 1 Mee 2020” Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọha na Ọha [More ...]
Ejidere mmadụ 09 na arụmọrụ a rụrụ n'ime mpaghara iri atọ na Machị 28 ruo nke 30 maka ndị otu uwe ojii kpebiri na ha ga-ere ngwa ahịa dị oke elu ma tinye ahụike nke ụmụ amaala. Site na ụdị coronavirus ọhụrụ (Covid-160) na ntụziaka nke Minista ime obodo Süleyman Soylu [More ...]
Mịnịstrị nke Mịnịstrị na-ahụ maka ụlọ ọrụ wepụtara okirikiri ma kpọsaa na a ga-egbochikwu tagzi azụmahịa na okporo ụzọ na Istanbul, Ankara, Izmir. "Ọhụụ dị iche iche gbasara Taxis nke azụmahịa n'ime oke Coronavirus jikoro maka Gọọmentị 81 dị iche iche. [More ...]
Coronavirus na-aga n'ihu na-agbasa ngwa ngwa. Oria eburula na Izmir nke Obodo. Mgbe emere ndị ọrụ dị n ’ụlọ ọrụ Kovid-19 n’ ụlọ nke isii ọ na-arụ ọrụ ka a chụpụrụ ya. [More ...]
Obodo Obodo isi obodo Istanbul kwuru na ọ bụ mmegharị ebumnuche ibugara ndị njem nọ n'okporo ụzọ IETT 62, site na ichebara ihe coronavirus ahụ echiche, ndị njem 47 si n'otu ebe na-abanye n'otu oge. [More ...]
Taa na akụkọ ihe mere eme: 30 March 1917 British agent Lavvrence
Taa na History 30 March 1917 onye nnọchi anya Britain Lavrence na ndị otu nnupụisi 230 na-eji ọgụ abụọ na egbe egbe wakpoo ọdụ Ebülnaim, jiri mbibi ogologo abụọ na 40 gbue ụzọ. [More ...]